အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Tiffany ရဲ့ “Peppermint” သီချင်းလေး နားထောင်ပြီးကြပြီလား ? – Trend.com.mm
Posted on November 30, 2018 by Wint
Girl Generation အဖွဲ့ဝင် Tiffany ကတော့ နိုဝင်ဘာ ၃ဝရက်နေ့မှာ သူမရဲ့သီချင်းအသစ်လေးကို ပရိတ်သတ်တွေဆီ အရောက်ပို့ခဲ့ပါပြီ။ ဒီသီချင်းလေးဟာ အေးမြ ချိုမြိန်တဲ့ အချစ်တစ်ခုကို ပုံဖော်တင်စားသီဆိုထားတာဖြစ်ပြီး Lyrics အပိုင်းမှာလည်း Tiffany ကိုယ်တိုင် ပါဝင်သီကုံးထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
마음을열어줘 your gift, your gift, your gift 🎁❤️ the past couple of months youve inspired me to really open up & to keep writing. thank you from the bottom of my heart for all the love that you continuously show. dedicating #PEPPERMINT to my forevers this xmas & wishing youaSWEET & COOL holiday🎄💫
A post shared by Tiffany Young (@tiffanyyoungofficial) on Nov 29, 2018 at 8:56pm PST
Tiffany က သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်မှာ သူမရဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီလိုလေးရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။“Wishing youasweet and cool holidays.” ဆိုပြီး သူမရဲ့သီချင်းအသစ်လေးကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ကဲ နားမထောင်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။ အသံကလည်း ချိုနေရော…